Kolonyo gaadiid gargaar sida oo ciidamo u galbiyeen degmada Maxaas – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Kolonyo gaadiid gargaar sida oo ciidamo u galbiyeen degmada Maxaas
A warsame 6 January 2015 6 January 2015
Mareeg.com: Ciidanka dowladda Soomaaliya iyo kuwa Midowga Afrika ayaa galbinaya deeq raashin ah oo loogu talagalay dadka ku dhibaateysan magaalooyinka Maxaas iyo Ceelbuur ee gobollada Hiiraan iyo Galgaduud.
Deeqda raashinka ah ayaa ka ambabaxday degmada Buulo-burte ee gobolka Hiiraan, sida sheegay taliyaha booliska gobolka, Kornayl Isaaq Cali Cabdulle.
Kornayl Isaaq ayaa sheegay in deeqda loogu talagalay dadka saboolka ah ee ku nool magaalooyinka ay ku wajahan tahay.
“Sida ugu dhaqsaha badan ayaan deeqda u gaarsiin doonnaa dadka loogu talagalay, Beledweyne ayaan marka hore geyn doonnaa, kaddib ayaan u gudbin doonnaa meelaha loogu talagalay,” ayuu yiri taliyaha.
Wuxuu sheegay inuu rajeynayo inay si nabadgalyo ah ku gaari doonto magaalooyinkaasi.
Ciidamo ka socda AMISOM, gaar ahaan Itoobiya oo ka ambabaxay degmada Maxaas ayaa shalay gaaray degmada Buulo-burte.
Raashinkaan oo markii hore laga qaaday Muqdisho ayaa waxaa Buulo-burte gaarsiiyey ciidamada Soomaaliya iyo kuwa AMISOM, gaar ahaan kuwa dalka Burundi.
CPJ oo ku baaqay in la fasaxo Radio Risaala lana sii daayo wariyaashiisa
Alshabaab oo afar nin ku toogtay degmada Baardheere (Sabab?)